ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၇-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၇-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ၂၀၁၅ မှာ သမ္မတ လုပ်ချင်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- သမ္မတဖြစ်လိုကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား click
- သမ္မတ တာဝန်ယူလိုဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲ (WEF) မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေး click
- WEF ညီလာခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်သံ) click
- “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်” ဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် ဖွင့်လှစ် click
- နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သမ္မတ ဖိတ်ခေါ် click
- ဆင်းရဲသားတွေဘ၀ မြှင့်ဖို့ ဦးသိန်းစိန် ပြော click
- ဘီဘီစီ စီးပွားရေးစကားဝိုင်း (အသံ) click
- ရှမ်းတောင်ပိုင်းတပ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ တွေ့မည် click
- သဘောတူညီချက်တွေကို အလုပ်ရှင်ဘက်က မလိုက်လျောသေး click
- နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ပေါ်ပေါက်ရေး ဆွေးနွေး click
- ၇၄ အလုပ်သမားအရေးအခင်း နှစ်ပတ်လည် (ရုပ်သံ) click
- မြောက်ဦး ပုရိန်ရွာပစ်ခတ်မှု ၃ ဦးသေဆုံးကြောင်း အာဏာပိုင်တွေ အတည်ပြု click
- မြန်မာနိုင်ငံသား ၉၀၀ ကျော် မလေးရှားမှာ ဖမ်းဆီးခံရ click
- မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦးတွေ တိုးတက်ဖို့ အိန္ဒိယ ကူညီမည် click
- ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်နဲ့ ကိုကိုကြီးရဲ့ ဆန်ဖရန်မြန်မာမိသားစု အမေးအဖြေများ click
- ယူတီကာရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများက မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးတို့ကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြမည် click
- ရွှေတွံတေးဆရာတော် နုိုင်ငံတကာ ဘုန်းကြီးများ အစည်းအဝေး တက်ရောက် click
- ရွှေည၀ါဆရာတော်ကြီး ဂျပန်သုို့ ကြွရောက်မည် click
- ရေတာရှည်အနီး ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် လူသေ click
- တယောက်တပင်နှင့် ကကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ကြစို့ click
- စင်တီယာဂို၊ အဘွားကြီးနှင့် ပင်လယ်ထဲသို့ ... click
- ထားဝယ်ဒေသက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (ရုပ်သံ) click
- ပြောပြစရာတွေ တပုံကြီး ရှိသေးတယ် (အသံ) click
- တူရကီ ဆန္ဒပြပွဲ ပိုကြီး ပိုကျယ်လာ click
- ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေ တူရကီဝန်ကြီးချုပ် လိုက်လျောမည်မဟုတ် click
- အမေရိကန်၊ တရုတ် သမ္မတနှစ်ဦး တွေ့ဆုံပွဲ (ရုပ်သံ) click
- အမျိုးသားလုံခြုံရေးဌာန ဖုန်းမှတ်တမ်း လျှို့ဝှက်ရယူ click
- တယ်လီဖုန်းမှတ်တမ်း စုဆောင်းမှု အစိုးရ ကာကွယ်ပြောဆို click
- Susan Rice နဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးတာဝန် (ရုပ်သံ) click
- ရုရှားသမ္မတ ပူတင် ဇနီးနှင့် ကွာရှင်း click
- ကိုလိုနီတိုက်ပွဲဝင် ကင်ညာလူမျိုးတွေကို ဗြိတိန်က နစ်နာကြေးပေးမယ် click
- တောင်ကိုရီးယားကို မြောက်ကိုရီးယား ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်း click
- တောင်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူ click
ဆင်းရဲသားတွေဘ၀ မြှင့်ဖို့ ဦးသိန်းစိန် ပြောတယ် သိရပါတယ် ။
- သိပ် တော. သိပ်မယုံပါဘူး ။
ပြည်သူတွေက အတော် ဆင်းရဲ နေပါပြီ၊
ပြည်သူတွေ အတွက် ချောင်လည်အောင် လုပ်ပေးတာတော. မတွေ. ပါဘူး ။
-- လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ ကိုတော.
ကား တွေရောင်းပေး ၊ မြေကွက်၊ တိုက်ခန်း ရောင်းပေး ၊
သစ်ပါမစ် ချပေး နဲ. လက်သိပ်ထိုး တမျိုး ၊ ပေါ်တင်တမျိုး ၊
- ပြည်သူတွေ အတွက် ချောင်လည်အောင် ဆိုရင်
-အနိမ်.ဆုံး လုပ်ခလစာတွေ တိုးမြှင်. သတ်မှတ် တာ ၊
-လုပ်သား ပြသနာတွေ ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းပေးတာ
-ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ. လျော်ညီတဲ. အခြေခံ ၀န်ထမ်းလစာ
-- အပြင် အသံကျယ် သူများလည်း လွှတ်တော်ထဲရောက်ရင် ပြည်သူတွေ အတွက် ချောင်လည်အောင် လုပ်ဖို. မေ.မေ. သွား
ပုံ ရတယ် ။ ။ ။
မလေးရှားကမြန်မာတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီ။ဒီနေ့၉ရက်၆လ၂၀၁၃ရဲ့update news တွေဖတ်ပြီ